Frenkie de Jong oo shaaca ka qaaday farqiga u dhexeeya Quique Setién iyo Ernesto Valverde – Gool FM
(Barcelona) 24 Jan 2020. Xiddiga khadka dhexe kooxda Barcelona ee Frenkie de Jong ayaa sheegay in ku guuleysiga tartanka Champions League ay noqon doonto riyadiisa ugu weyn.
Frenkie de Jong ayaa wuxuu dhinaca kale shaaca ka qaaday in macalimiinta Quique Setién iyo Ernesto Valverde ay xambarsaan yihiin fikrado aad isugu dhow ee quseeya qaabka ay u ciyaarayaan.
Wargeyska “Sport” ee dalka Spain ayaa wuxuu shaaca ka qaaday wareysi uu bixiyay xiddiga reer Holland ee Frenkie de Jong waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Waxaan doonayaa inaan ku guuleysto koobabka oo dhan, laakiin haddii ay tahay inaan doorto hal koob, waxaan dooran doonaa tartanka Champions League, inkastoo aan sidoo kale doonayo inaan ku guuleysto horyaalka La Liga iyo Copa del Rey”.
“Xilli ciyaareedkii hore, finalka Champions League waxa uu ku dhawaaday inuu noqdo mid khaas ah, haddii ay kooxaha Barcelona iyo Ajax u soo bixi lahaayeen, xilli ciyaareedkan waxaan rajeynayaa inaan halkaas ku ciyaaro kulanka finalka”.
Intaas kaddib Frenkie de Jong ayaa waxaa la weydiiyay su’aal aheyd farqiga u dheexaya Quique Setién iyo Ernesto Valverde wuxuuna ku jawaabay:
“Ma jiraan wax qaas ah, fikirka ayaa la mid ah kan Ernesto Valverde, ujeedka labada macalin waa kubad heysashada”.